यी ४ ठाउँमा कोठी हुने महिला पुरुषसँग थुप्रिन्छ असिमित धन ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यी ४ ठाउँमा कोठी हुने महिला पुरुषसँग थुप्रिन्छ असिमित धन !
काठमाडौ । हाम्रो शरीरको विभिन्न स्थानमा दाग तथा कोठीहरु हुन्छन् । के ति कोठीहरुले कुनै शुभ वा अशुभ फल प्रदान गर्दछ ? यस सम्बन्धमा मसुन्द्र शास्त्रमा शरीरमा भएको कोठी वा चिन्हका आधारमा व्यक्तिको भाग्य र भविष्य विश्लेषण गरिएको छ ।
मानिसले कुनै नयाँ काम गर्न खोज्दा चिन्ह, कोठी तथा रेखाहरु देखिने तथा केहि समयपछि आफै हराएर पनि जाने हुन्छ । शरीरको यी ४ ठाउँमा कोठी हुने व्यक्त्तिहरु अत्यन्तै धनी हुन्छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अनुहारको छाला चम्किलो बनाउन सघाउने घरेलु औषधिहरु